Khin Ma Ma Myo's Blog: October 2008
စမာနဂိုရ်က နွားမပေါင်ကျိူးလိမ့်မည်လော (အပိုင်း-၁)
Essay : Universal Human Rights, Justice and Trans...
For Ko Thet Win Aung
Nelson Mandela International Essay Competition (Ro...
တရားမျှတမှုဆိတ်သုဉ်းနေသော နအဖအာဏာရှင်စနစ်ကို နိဂုံ...
Women Peacemakers Program (calling interns)
ကိုဂျုလိုင်က တက်ခ်ထားတာ ကြာပြီ။ ရေးမယ်၊ ရေးမယ်နဲ့ ရေးလို့မရဘူးဖြစ်နေတယ်။ တခြားစာတွေရေးရင် ကျွန်မရဲ့ လက်ချောင်းလေးတွေက စာရွက်တွေပေါ်မှာ၊ ကွန်ပျူတာခလုတ်ခုံပေါ်မှာ ပြေးလွှားဆော့ကစားနေကြ။ အခုကျတော့ အဲလိုမဟုတ်ဘူး ဖြစ်နေခဲ့တယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ဒီတက်ခ်လေးကို ရေးရမှာက ကျွန်မရဲ့ နှလုံးသွေးစက်တွေနဲ့ ဖြစ်နေလို့ပါပဲ။
ဒီစကားလုံးလေးကို ကြားရစဉ်တိုင်းမှာ ကျွန်မရဲ့ အတွေးစဉ်တွေထဲကို ပုံရိပ်တခုက လွှမ်းမိုးလာပါတယ်။ သူကတော့ ကျွန်မက အစ်ကိုလို့ ချစ်မြတ်နိုးစွာ တလေးတစား ခေါ်တတ်ပြီး၊ ကျွန်မကို ညီမလေးလို့ ခေါ်တတ်တဲ့ ကျွန်မရဲ့ အချစ်ဦး ချစ်သူတယောက်ပါ။ တခါတလေမှာ သူ့ကို “ကိုမောင်”လို့ ခေါ်ခိုင်းတတ်ပေမယ့်၊ ခေါ်ဖို့မရဲဘူးဆိုပြီး ကျွန်မအမြဲငြင်းခဲ့ဖူးပါတယ်။
သူ့ကိုဘာလို့ ချစ်ခဲ့လဲ ကျွန်မလုံးဝမသိပါဘူး။ သေချာတာကတော့ သူဘယ်သူဘယ်ဝါဆိုတာ လုံးဝမသိရသေးခင်မှာပဲ သူ့မျက်လုံးလေးတွေကို စတင်ဆုံစည်းမိချိန်မှာ ကျွန်မရင်ခုန်သံစည်းချက်တွေ ထွက်ပေါ်လာခဲ့တယ်ဆိုတာပါပဲ။ ကံကောင်းချင်တော့ ကျွန်မတို့နှစ်ယောက် ချစ်သူတွေ ဖြစ်ခွင့်ရခဲ့ကြပါတယ်။ ကံဆိုးချင်တော့ ဘ၀တလျှောက်လုံး ဆုံစည်းခွင့်ဆိုတာကို မရခဲ့ကြပါဘူး။ “ချစ်တိုင်းလဲမညား၊ ညားတိုင်းလဲမချစ်”ဆိုတဲ့ဆိုရိုးစကားက ဘ၀မှာ တကယ်ပဲ ဖြစ်တတ်တာကလား။
ဘာတွေပဲဖြစ်ဖြစ် သူနဲ့ ဆုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့ အချိန်လေးတွေဟာ ဘယ်တော့မှ မေ့ပျောက်သွားနိုင်မှာ မဟုတ်တဲ့ အမှတ်တရလေးတွေပါပဲ။ မွေးရပ်မြေတောင်ပေါ်မြို့လေးက စားသောက်ဆိုင်လေးတွေမှာ အတူလက်ဆုံထမင်းစားခဲ့ကြရင်း ကြည်နူးခဲ့ရတဲ့ အချိန်လေးတွေ၊ တောင်ပေါ်ဘုရားလေးမှာ ဘုရားအတူဖူးရင်း ဆိုခဲ့ဖူးတဲ့ သစ္စာတရားတွေ၊ အလည်ရောက်ခဲ့ဖူးတဲ့ ရွာငယ်ကလေးတွေ၊ ဆွေးနွေးခဲ့ဖူးတဲ့ နိုင်ငံရေးရာလေးတွေဟာ ကျွန်မရဲ့ အတွေးစဉ်တွေထဲကို ထာဝရခိုတွယ် နေရာယူထားခဲ့ပါတယ်။
သူပြောပြခဲ့တဲ့ ခေတ်အဆက်ဆက် တော်လှန်ရေးသမိုင်းတလျှောက်က တိုက်ပွဲခေါ်သံတွေကို ပြန်လည်ကြားယောင်မိတိုင်း ကျွန်မရဲ့ နှလုံးသွေးတွေ ပွက်ပွက်ဆူနေဆဲ၊ အခက်အခဲတွေ ကြုံတွေရတိုင်း လက်ဖ၀ါးကို ဆုပ်ကိုင်အားပေးတတ်တဲ့ သူ့လက်ဖ၀ါးပြင်က အနွေးငွေ့လေးကို ကျွန်မအခုအချိန်ထိ ခံစားနေရဆဲ၊ “ရင်ထဲက ယုံကြည်ချက်အလံကို ဘယ်အရာကမှ လာနှဲ့လို့မရဘူး” ဆိုတဲ့ သူ့စိတ်ဓာတ်အပေါ် လေးစားမှုတွေနဲ့အတူ ကျွန်မရဲ့ ယုံကြည်ချက်၊ ခံယူချက်တွေကလဲ သံမဏိလို ခိုင်မာနေဆဲ။
သူဟာ ကျွန်မအတွက်တော့ ဘ၀တခုပါ။ သူနဲ့ပတ်သက်ပြီး အချစ်ဆိုတာကို ခံစားမိခဲ့ရတယ်။ အချစ်ဆိုတာရဲ့ နောက်ကွယ်က တဦးပေါ်တဦးနားလည်မှု၊ မြတ်နိုးတန်ဖိုးထားမှု၊ ယုံကြည်မှု၊ အခက်အခဲတွေကို အတူဖြတ်ကျော်ရင်ဆိုင်နိုင်မှု ဆိုတဲ့ အရာတွေကိုလည်း နားလည်သဘောပေါက်ခဲ့ရတယ်။ ကျွန်မလျှောက်လှမ်းသင့်တဲ့ ဘ၀လမ်းကြောင်းမှန်ကိုလည်း သူလမ်းညွှန်ပြသခဲ့တယ်။
လူမှုဘ၀တာဝန်အဖြာဖြာနဲ့ ရှုပ်ထွေးနေရတဲ့ ဘ၀မှာ အချိန်ပြည့် သတိရနေတယ်လို့တော့ ကျွန်မမဆိုလိုပါဘူး။ ဒါပေမယ့် တိုက်ဆိုင်မှုလေးတွေ ရှိတဲ့အခါတိုင်း၊ သီချင်းလေးတွေ နားထောင်မိတဲ့ အခါတိုင်း သူဟာ ကျွန်မအတွေးထဲကို ရောက်ရောက်လာတတ်တယ်။ သူကမုန့်ဟင်းခါးသိပ်ကြိုက်တာ။ အရင်တုန်းကဆို ဆိုင်မှာပဲ ကျွန်မတို့ အတူစားခဲ့ကြတာ။ အခုလို ဟိုစပ်စပ်ဒီစပ်စပ် စချက်တတ်စ အချိန်လေးမှာ သူ့ကို ချက်ကျွေးချင်လိုက်တာရှင်။ ဘာတွေဘယ်လိုထည့်ပြီး ဖျော်ထားမှန်းမသိတဲ့ ကော်ဖီတခွက်ကို ချစ်သူရဲ့ ပထမဆုံးဖျော်ဖူးတဲ့ ကော်ဖီလေးအနေနဲ့ ကြိတ်မှတ်သောက်ခဲ့ဖူးတဲ့ သူ့ကို ကော်ဖီဖျော်တိုင်းလဲ သတိရနေဆဲပဲ။
ခရီးတခုခုသွားရရင် တောင်တန်းကြီးတွေကို မြင်မိတိုင်း ကွေ့ကောက်နေတဲ့ တောင်ပေါ်လမ်းလေးတွေမှာ ကျင်လည်စွာကားမောင်းနေတဲ့ သူ့ရဲ့ဟန်ကို ပြန်လည်မြင်ယောင်မိနေဆဲ။ ကျွန်မက တောင်ပေါ်လမ်းလေးတွေကို သဘောကျတာမို့ တခါတလေ ကျွန်မတို့နှစ်ယောက် ဘာမှကို မယ်မယ်ရရမဟုတ်ပဲ တောင်ကြီး-ကလော၊ တောင်ကြီး-ရွာငံ၊ တောင်ကြီး-ဟိုပုန်း၊ တောင်ကြီး-ရပ်စောက်လမ်းတွေပေါ်မှာ ကားထွက်မောင်းနေတတ်ကြတယ်။ တွေ့ကရာ လမ်းဘေးဆိုင်လေးတွေမှာ ကားရပ်ပြီး မုန့်စားတတ်ကြသေးတယ်။ လမ်းတလျှောက်လုံး သူ့ကို ကားမောင်းခိုင်းပြီး၊ ဘေးကနေ မုန့်တစွပ်စွပ်စားလိုက်၊ သူ့ပါးစပ်ထဲ မုန့်ထည့်ပေးလိုက်နဲ့ ကလေးဆန်ဆန် ပြုမူခဲ့ဖူးတာလေးတွေကို သူက သည်းခံပြီး ပြုံးပျော်ပေးခဲ့ဖူးတယ်။
အခုအချိန်ထိ ရှော့ပင်ထွက်တဲ့ အခါတိုင်း အမျိုးသားဝတ်စုံတွေဘက်ကို မကြည့်မိအောင် ကျွန်မအမြဲ သတိထားမိနေရတယ်။ တခါတလေမှာ သူဝတ်လေ့ရှိတဲ့ ရှပ်အကျီင်္အဖြူလေးတွေတွေ့ရင် ယောင်နနနဲ့ ကျွန်မသွားကိုင်မိနေဆဲပဲ။ အခြေအနေအကြောင်းကြောင်းကြောင့် ကျွန်မဆီမှာ သူ့ဓါတ်ပုံလေးတောင် အမှတ်တရမရှိခဲ့။ ဒါပေမယ့် ကျွန်မရဲ့ မျက်ဝန်းလေးကတော့ သူ့ပုံရိပ်ကို ထာဝရရင်မှာ သိမ်းထားဖို့ ဓာတ်ပုံရိုက်ယူခဲ့ပြီးသားမို့ တော်သေးတယ်ဆိုရမလား။ သူနဲ့ ပတ်သက်လို့ သူ့လက်ရေးလေးတွေနဲ့ ရေးထားတဲ့ စာလေးတစောင်ပဲ အမှတ်တရ ကျွန်မဆီမှာ ရှိနေခဲ့တယ်။ ကျွန်မနိုင်ငံခြားထွက်လာခါနီးမှာ ပေးလိုက်တဲ့ အော်တိုဆန်ဆန်စာသားလေးတခု။ ထုတ်ဖတ်ရလွန်းလို့ အခုဆိုရင် စာရွက်တွေတောင် မွကြေနေခဲ့ပြီမို့ နေ့စဉ်တွေ့ရအောင် မှန်တင်ခုံလေးမှာ ကပ်ထားလိုက်ရတယ်။ သူရေးထားတာက
အင်မတန်မှ အရည်အသွေးထက်မြက်ပြီး အလွန်တရာ အဖိုးထိုက်တန်တဲ့ ပတ္တမြားကျောက် ရဖို့ဆိုရင် အလွန်တရာ နက်ရှိုင်းပြီး၊ အပင်ပန်း၊ အဆင်းရဲခံမှုတွေနဲ့ ရင်းမှ ရနိုင်မယ် ညီမလေး။
ဒီစာရွက်လေးနဲ့ ဒီစာသားလေးဟာ ကျွန်မဘ၀အတွက် ဘာနဲ့မှ လဲလှယ်လို့မရနိုင်တဲ့ အဖိုးမဖြတ်နိုင်သော ရတနာ ပစ္စည်းလေးတွေပါ။ ဒီစာသားလေးကို ဖတ်မိစဉ်အခါတိုင်း ကျွန်မဘေးမှာ သူရှိနေသလို အားအင်တွေ ပြည့်လာရတယ်။ စိတ်ခွန်အားတွေ တိုးတက်လာခဲ့ရတယ်။ သူဟာ ကျွန်မဘ၀အတွက် ဘယ်တော့မှ အစားထိုးမရနိုင်တော့တဲ့ ချစ်သူတယောက်ပါပဲ။
ဟိုး- လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ပေါင်းများစွာက သူနဲ့ ကျွန်မလေ တောင်ပေါ်ဘုရားလေးတဆူ အနီးမှာ ဆုံကြတုန်း သူက ကတိတခု တောင်းခဲ့ဖူးတယ်။ အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် ကွဲကွာသွားခဲ့ရင်၊ မြန်မာပြည်တော်လှန်ရေးကို အသက်မသေသေးသရွေ့ ဆက်လုပ်နေကြပြီး၊ ဒီမိုကရေစီရပြီးတဲ့ ပထမဆုံးနှစ် အောက်တိုဘာ (၂၁)ရက်နေ့မှာ ပြန်ဆုံကြဖို့ကိုပါ။ တကယ်လို့ တယောက်ယောက်ရောက်မလာခဲ့ရင် ကျန်တဲ့တယောက်က ဘုရားပေါ်တက်ပြီး အမျှ ဝေပေးရမယ်တဲ့လေ။
ကျွန်မအဲဒီအချိန်လေးကို စောင့်စားနေမိတယ်။ သူကကော တကယ်ပဲ ရောက်မလာနိုင်တော့တာလား။ ကျွန်မကကော အဲဒီအချိန်ထိ အသက်ရှင်နေပါ့မလား။ ကျွန်မ မသိပါဘူးလေ။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ရှင်။ ကျွန်မဘ၀မှာ ဆုတောင်းလေးတခုသာ ပြည့်ခွင့်ရခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ မြန်မာပြည်ဒီမိုကရေစီရပြီးတဲ့နှစ်ရဲ့ ပထမဆုံးအောက်တိုဘာလ (၂၁) ရက်နေ့မှာ ရှမ်းပြည်တနေရာက တောင်ပေါ်ဘုရားလေးဆီမှာ ကျွန်မရဲ့ ချစ်သူလေးကို တွေ့ရပြီး၊ သူကြားချင်တယ်ဆိုတဲ့ “ကိုမောင်”ဆိုတာလေး ခေါ်ဆိုနိုင်ပါရစေလို့ ဆုတောင်းမိမှာ အမှန်ပါပဲ။
တခါတလေတော့လဲ အချစ်ဆိုတာ လွမ်းစရာလေးတွေနဲ့ ပြည့်နှက်နေတတ်တာပါကလား။
ခင်မမမျိုး (၂၆၊၁၀၊ ၂၀၀၈)
နိုင်ငံတခုမှာ အစိုးရရယ်၊ ပြည်သူရယ်၊ စစ်တပ်ရယ်ဆိုတဲ့ တြိဂံပုံသဏ္ဍာန်ဖြစ်တည်မှု တခု ရှိတယ်။ အစိုးရဆီမှာ ပြည်သူ့အာဏာ သက်ဆင်းမှုရှိရတယ်။ စစ်တပ်ဆိုတာကတော့ ပြည်သူလူထုကို ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့ထားရှိရတဲ့ အဖွဲ့အစည်းတရပ်ဖြစ်တယ်။ဒါပေမယ့် မြန်မာပြည်မှာကျတော့ ပြည်သူလူထုကို စောင့်ရှောက်ရမယ့် စစ်တပ်က ပြည်သူကိုသတ်ပြီး ပြည်သူ့အာဏာသက်ဆင်းရမယ့် အစိုးရနေရာကို အတင်း လုယူထားတယ်။ ဒီတော့ တြိဂံပုံသဏ္ဍာန်ဟာ ပျက်ယွင်းသွားပြီ။ အာဏာသိမ်း စစ်အစိုးရနဲ့ ပြည်သူလူထုဆိုတဲ့ ဘက်နှစ်ဘက် ထိပ်တိုက်ဖြစ်နေပြီ။
အတိုက်အခံဆိုတာက ဖိနှိပ်ခံလူတန်းစားတွေရှေ့က ရဲရဲဝံ့ဝံ့ ရပ်တည်တိုက်ပွဲဝင်ဖို့ ပေါ်ထွက်လာသူတွေဖြစ်တယ်။ ဒါကြောင့် ဒီတိုက်ပွဲဟာ စစ်အစိုးရနဲ့ အတိုက်အခံများကြားက အားပြိုင်တဲ့ပွဲမဟုတ်ဘူး။ ဖိနှိပ်တဲ့ စစ်တပ်နဲ့ အဖိနှိပ်ခံ ပြည်သူများအကြားက တိုက်ပွဲတရပ်သာ ဖြစ်တယ်။ ဒီတော့ ကြားနေဆိုတာ မရှိဘူး။ဖိနှိပ်တဲ့ စစ်တပ်ဘက်က ရပ်တည်မှာလား၊ အဖိနှိပ်ခံရတဲ့ ပြည်သူဘက်က ရပ်တည်မှာလားဆိုတဲ့ ရွေးချယ်မှုကိုသာ ရွေးချယ်ရတော့မှာ ဖြစ်တယ်။ အဖိနှိပ်ခံပြည်သူတွေကို မျက်ကွယ်ပြုပြီး ကြားနေတယ်ဆိုရင်တော့ ဖိနှိပ်တဲ့ စစ်တပ်ကို အားပေးရာကျနေလိမ့်မယ်။
ပြည်သူလူထုထဲမှာလည်း ဖိနှိပ်သူကိုမှ အားပေးအားမြှောက်လုပ်ပြီး အခွင့်အရေး ယူနေသူတွေရှိတယ်။ ဒီလူတွေဟာ လူထုသစ္စာဖောက်တွေဖြစ်တယ်။ တပ်မတော်သားတွေထဲမှာလဲ ပြည်သူနဲ့ ပူးပေါင်းပြီး၊ တြိဂံပုံသဏ္ဍာန် တည်ဆောက်ချင်သူတွေ ရှိနေမယ်။ ဒီလိုမျိုးချစ်သူရဲကောင်းတွေကို လူထုနဲ့ အမြန်ပူးပေါင်းဖို့ ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။ စစ်တပ်ရဲ့ အခန်းကဏ္ဍဆိုတာ တြိဂံပုံသဏ္ဍာန်အနေနဲ့ အမြဲတည်ရှိနေပြီးသားပါ။ ဒီအခန်းကဏ္ဍကို မြောင်းထဲရောက်အောင်၊ ပြည်သူ့ချဉ်ဖတ်ဘ၀ရောက်အောင် ပြည်သူတွေဆီ သေနတ်ပြောင်းကို ဘယ်သူတွေ ချိန်ခိုင်းခဲ့တာလဲ။ ပြည်သူ့သားကောင်းပီသစွာ သေနတ်ပြောင်းတွေကို နောက်ပြန်လှည့်လိုက်ပါ။
သူ့နေရာနဲ့သူ လှပပြီး၊ အဓိပ္ပာယ်ပြည့်ဝနေတဲ့ တြိဂံပုံသဏ္ဍာန် ဖြစ်တည်မှုကို နိုင်ငံသစ်ဆီမှာ ပြန်လည်တည်ဆောက်ကြပါစို့။
Global Financial Crisis (2008) စတင်လာတာနဲ့ တပြိုင်နက် အာရှတိုက်အပေါ် ဘယ်လိုသက်ရောက်မှုရှိနိုင်မလဲ ဆိုတဲ့အချက်ဟာ အာရှရေးရာလေ့လာသူများနဲ့ ဘောဂဗေဒ ပညာရှင်များအကြားမှာ ရေပန်းအစားဆုံး ဆွေးနွေးချက်တခုဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ policy makers များအတွက်လဲ အလွန်ပင် ခေါင်းခဲစရာ ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။
တချို့သော ပညာရှင်များက ပြဿနာရဲ့ ပင်မရင်းမြစ်ဟာ အမေရိကနဲ့ ဥရောပ ငွေကြေးစနစ်တွေမှာ ဖြစ်နေတာရယ်၊ အာရှငွေကြေးစနစ်က ၁၉၉၇ financial crisis အပြီးမှာ reform လုပ်ပြီးသာ ဖြစ်နေတာရယ်ကြောင့် အာရှကို ထိခိုက်မှုနည်းမယ်လို့ ယူဆကြပါတယ်။ အာရှအရှေ့ပိုင်းနိုင်ငံများ အချင်းချင်းကြားက Inter-trade flows ခိုင်မာမှုကိုလဲ ထောက်ပြကြပါမယ်။ သို့ပေမယ့်လဲ အာရှနိုင်ငံများကြားက trade flows ဟာ integrated production networks ပုံသဏ္ဍာန်အဖြစ်သာ ရှိနေပြီး ကုန်ပစ္စည်းများရဲ့ နောက်ဆုံးဦးတည်ရာ destination ကတော့ အမေရိကနဲ့ ဥရောပသာ ဖြစ်နေတာကြောင့် ရိုက်ခတ်မှုဟာ မလွဲမသွေဖြစ်နိုင်ကြောင်း ပြန်လှန်ငြင်းဆိုမှုတွေ ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။
UN conference on Trade and Development (UNCTAD) ရဲ့ ညွှန်ကြားရေးမှူးဟောင်းတဦးဖြစ်တဲ့ Dr Yilmaz Akyuz ကတော့ ၂၀၀၈ခုနှစ်၊ ဧပြီလ (၂၉) ရက်နေ့က ဘန်ကောက်မှာ ကျင်းပခဲ့တဲ့ UN Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (ESCAP) ministerial session မှာ အာရှတိုက်ကို ရိုက်ခတ်နိုင်မယ့် ဂယက်တွေကို စာတမ်းတင်သွင်းဖတ်ကြားခဲ့ပါတယ်။ သူ့စာတမ်းရဲ့ အနှစ်ချုပ်ကတော့ အာရှနိုင်ငံတော်တော်များမှာ foreign reserves များရှိနေပြီး၊ domestic savings မြင့်မားတာကြောင့် domestic consumption တက်အောင် ပြုလုပ်နိုင်မယ်ဆိုရင် financial crisis ကြောင့် export sector မှာ ဖြစ်ပွားလာမယ့် စီးပွားရေးနှောင့်နှေးမှုတွေကို offset လုပ်လာနိုင်လိမ့်မယ်လို့ ဖော်ပြထားပါတယ်။ ဒါပေမယ့် credit bubbles နဲ့ asset bubbles တွေတော့ ဖြစ်လာနိုင်တာကိုတော့ စိုးရိမ်ဖွယ်ရာရှိကြောင်း ပြောဆိုထားခဲ့ပါတယ်။
ဘဏ္ဍာရေးလောကမှာ borrower တွေ ငွေကြေးအမြောက်အမြားချေးယူပြီး အကြွေးတွေ ပြန်မဆပ်နိုင်တော့တဲ့ အခြေအနေမျိုးဆိုက်ရောက်လာတာကို credit bubble လို့ သုံးနှုန်းပါတယ်။ များသောအားဖြင့် state of economy ဟာ ဒီလိုဖြစ်လာတယ်ဆိုရင် bankrupcy ခံမှုတွေ၊ financial crisis တွေနဲ့ နိဂုံးချုပ်သွားတတ်ပါတယ်။ Asset Bubble ဆိုတာကတော့ investment (သို့) security တွေရဲ့ ဈေးနှုန်းတွေ ကြောက်မယ်ဖွယ်ရာကောင်းအောင် ရုတ်ခြည်းခုန်တက်သွားတာကို ဆိုလိုပါတယ်။ ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာ ကိန်းဂဏန်းများအရ အာရှနိုင်ငံများကို စီးဝင်တဲ့ private capital inflows ခြောက်ဆယ်ရာခိုင်နှုန်းကျော်ဟာ equity investment မှာဖြစ်ပြီး၊ ၂၅ ရာခိုင်နှုန်းကျော်က investment bank lending မှာဖြစ်ပါတယ်။ ကျန်တဲ့ရာခိုင်နှုန်းတွေကတော့ အခြား debt flows တွေဖြစ်တဲ့ bonds နဲ့ carry-trade related ချေးငွေတွေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလို capital inflows များကြောင့် liquidity expansion ဖြစ်ပြီး bubbles တွေဖြစ်စေါတယ်။ အိမ်ခြံမြေဈေးကွက်မှာလဲ အရမ်းကာရော boom ဖြစ်သွားတတ်ပါတယ်။ တဖြည်းဖြည်းနဲ့ ဒီ bubbles တွေကြောင့် domestic fragility တွေ ဖြစ်လာစေနိုင်ပါတယ်။
ဒီလို fragility တွေ၊ financial crisis ကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့ ကုန်သွယ်မှုနဲ့ ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာ shocks တွေဟာ policy makers တွေအတွက်တော့ တကယ့် challenges တွေပါပဲ။ ဒီလိုအခြေအနေမျိုးတွေမှာ domestic demand ကို fiscal stimulus ကတဆင့် ချဲ့ထွင်တာဟာ အသင့်လျော်ဆုံးပေါ်လစီ response ဖြစ်ပြီး၊ ဘဏ္ဍာရေးကဏ္ဍမှာ အခက်အခဲတွေ မြင့်တက်လာတာနဲ့ 'lender of last resort' financing ကို အစိုးရများမှ စီမံဆောင်ရွက်ပေးဖို့လိုကြောင်း ပညာရှင်များက အကြံပြုထားကြပါတယ်။ အိုင်အမ်အက်ဖ်ကလဲ fiscal policy ကို countercyclical tool အနေနဲ့ သုံးဖို့လိုကြောင်း အောက်တိုဘာလထုတ် World Economic Outlook (WEO) Financial Stress, Downturns and Recoveries စာတမ်းမှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။
အခုလို နိုင်ငံတကာမှာ ပေါ်လစီရေးရာတွေ ချမှတ်ရေးဆွဲနေကြချိ်န်မှာပဲ subprime crisis ရဲ့ သွယ်ဝိုက်သက်ရောက်မှုများကတော့ အာရှနိုင်ငံများဆီကို တစတစ ကူးစက်လာပါတော့တယ်။ ရှန်ဟိုင်း composite index ဟာ အောက်တိုဘာလ ၊ (၂၀၀၇) ခုနှစ်နဲ့ စာရင် ခုနစ်ဆယ်ရာခိုင်နှုန်းထိုးကျသွားပါတယ်။ အာရှရဲ့ capital outflows ဟာ ပထမပိုင်း ရှစ်လမှာတင် $38 billion ကျော်သွားတယ်။ ဖိလစ်ပိုင်နဲ့ အင်ဒိုနီးရှားက bond auctions တွေ failure ဖြစ်ကုန်တယ်။ အာရှငွေကြေးတွေဖြစ်တဲ့ အင်ဒိုနီးရှား rupiah, ကိုးရီးယား won, ထိုင်း baht, ဗီယက်နမ် dong နဲ့ အိန္ဒိယ rupee တွေမှာ downward pressure တွေဖြစ်လာတယ်။ အိန္ဒိယမှာဆိုရင် နိုင်ငံရဲ့ အကြီးဆုံး ပရိုက်ဗိတ်ဘဏ်ကနေ ငွေအပ်သူတွေက ပိုက်ဆံပြန်ထုတ်နေကြတယ်။ ပါကစ္စတန်မှာ balance of payment crisis က အကြီးအကျယ်ဖြစ်လာတယ်။ စင်ကာပူနဲ့ Baharian တို့မှာ ၀ါရင့်နိုင်ငံရေးသမားများကို စီးပွားရေးတိုးတက်မှုနဲ့ဘဏ်စနစ်ခိုင်မာမှုရေးရာ ပါဝင်ဆောင်ရွက်ဖို့ ပလက်ဖောင်းတခုခွင့်ပြုတဲ့ verbal intervention ကို engage လုပ်လာရတယ်။
အောက်တိုဘာလ (၁၆) ရက်နေ့မှာ Kazakhstan နိုင်ငံမြို့တော် Astana မှာ ကျင်းပခဲ့တဲ့ Pan-Asia ministerial forum မှာ အာရှနိုင်ငံများအချင်းချင်း ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တဲ့ co-ordinated measures တွေကို အကောင်အထည်ဖော်ဖို့ ဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်။ အောက်တိုဘာလ (၂၃) ရက်နေ့မှာ တရုတ်ပြည် ဘေဂျင်းမှာ ကျင်းပတဲ့ ASEM Summit မှာ EU President Jos'e Manuel Barriso က " The eye of the storm was in the US, but it isaglobal storm and there will be ripple effects all over the world. Simply we swim together or we sink together” လို့ ပြောကြားလာခဲ့တယ်။
တကယ်တော့ သူလဲလေလောကီသားပေမို့ ဆိုတဲ့အတိုင်း ကမ္ဘာတ၀ှမ်းလုံးမှာ financial crisis ဖြစ်ပွားနေချိန်မှာ အာရှနိုင်ငံတွေကို ရိုက်ခတ်မှုများဟာလဲ မလွဲမသွေ ကြုံတွေ့ရင်ဆိုင်ကြရမှာပါပဲ။ တရုတ်နဲ့ အိန္ဒိယအပါအ၀င် အာရှနိုင်ငံများရဲ့ export market ဟာ အမေရိကန်၊ ဥရောပနဲ့ ဂျပန် (G3) တို့ဖြစ်နေတာကြောင့် ဒီနိုင်ငံများမှာ စီးပွားရေး ကျဆင်းတယ်ဆိုတာနဲ့ spill over effects တွေ ဖြစ်ပွားလာမှာကတော့ အသေအချာပါပဲ။ အာရှဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဘဏ် ADBရဲ့ chief economist ကတော့ 'If the global slowdown extends beyond 2009, the repercussions for the region could be severe' လို့ အဆိုပြုထားခဲ့ပါတယ်။ ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ၊ Institute of Political Studies က ဘုတ်အဖွဲ့ဝင် Reihana Mohideen ကလဲ 'If the western economies get the flu, not only will Asia sneeze, but it could catchafever' လို့ အတည်ပြုဆိုထားလိုက်ပါပြီ။
ဆက်လက်ပြီး Global Financial Crisis (2008) ဟာ နဂိုကတည်းက ယိုင်လဲလုနီးပါးဖြစ်နေတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ စီးပွားရေးအဆောက်အအုံ အပေါ်မှာကော ဘယ်လို ရိုက်ခတ်မှုတွေ ဖြစ်လာနိုင်မလဲဆိုတာကို လေ့လာကြည့်ကြရအောင်ပါ။ ရိုက်ခတ်မှုတွေအကြောင်း မဆန်းစစ်ခင် လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံ စီးပွားရေးအဆောက်အအုံရဲ့ ပကတိအခြေအနေမှန်ကို တင်ပြချင်ပါတယ်။ နအဖကတော့ စီးပွားရေးဖြစ်ပေါ်ပြောင်းလဲတိုးတက်မှုများလို့ ဆိုပါတယ်။ ဒီအချက်မှန်မမှန်ကို ကိန်းဂဏာန်းများ၊ ကားချပ်များက အခုလို ညွှန်းဆိုပြသပါလိမ့်မယ်။
ခင်မမမျိုး (၂၃၊ ၁၀၊ ၂၀၀၈)
(၂၀၀၈)ခုနှစ် Global Financial Crisis ရဲ့ အစကနဦးကတော့ subprime crisis ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ချေးငွေထုတ်ပေးသူတွေဟာ ကြွေးမြီပြဿနာရှိမှုနဲ့ လုံလောက်သောဝင်ငွေမရှိမှုတို့ကြောင့် ordinary prime loans တွေ မရနိုင်သူတွေကို subprime loans တွေ ထုတ်ချေးပါတယ်။ ဒီချေးငွေတွေရဲ့ အတိုးနှုန်းက ပထမပိုင်းနှစ်နှစ်၊ သုံးနှစ်မှာ teaser rate ဆိုတဲ့ လေးရာခိုင်နှုန်းပဲ သတ်မှတ်တာကြောင့် လစဉ်ပြန်ပေးချေရမယ့်ဆပ်ငွေက နည်းပါတယ်။ သုံးနှစ်လောက်လဲကြာရော prevailing rate အနေနဲ့ တက်သွားပါတယ်။ တခါတရံ ရှစ်ရာခိုင်နှုန်းလောက်အထိ တက်သွားတာကြောင့် လစဉ်ပြန်ပေးရမှာက နှစ်ဆလောက်ဖြစ်သွားပါတယ်။ များသောအားဖြင့် ချေးငွေထုတ်ပေးတဲ့ဘက်က down payment လဲ သတ်မှတ်ထားတာ မဟုတ်တာကြောင့် ဘဏ္ဍာရေးလောကမှာ negative amortization လို့ခေါ်ဆိုတဲ့ ဖြစ်စဉ်တရပ်ဖြစ်လာပါတယ်။ ဒီဖြစ်စဉ်ဟာ ချေးငှားသူတွေရဲ့ ကြွေးမြီတွေကို တစတစ မြင့်မားလာစေပါတယ်။ Standard Mortgage မှာ အကြွေးက တစတစ လျော့သွားတာ ဖြစ်သွားပေမယ့် Subprime Mortgage မှာကျတော့ အကြွေးက တစတစနဲ့ လည်ပင်းထိနစ်အောင် တက်လာတာမျိုးပါ။ ဒီလိုနဲ့ ၂၀၀၄ ခုနှစ်ထဲမှာ အိမ်ဈေးတွေက ၂၀ ရာခိုင်နှုန်းလောက် ထပ်တက်သွားတယ်။ ၂၀၀၅ ခုနှစ်မှာဆိုရင် အသစ် home mortgage များရဲ့ ၂၂ရာခိုင်နှုန်းဟာ subprime တွေဖြစ်နေပြီ။ အိမ်ဈေးတွေက တောက်လျောက်ဆက်တက်လာတယ်။ ဘဏ္ဍာရေးသဘောတရားအရ ဒီလိုဖြစ်လာတာဟာ bubble ဖြစ်လာတာ။ အမေရိကန်ပြည်သူတွေရဲ့ ၀င်ငွေကတော့ တက်မလာဘူး။ တန့်နေတယ်။ ဒီလို အတိုးနှုန်းမြင့်တာလာမှုနဲ့ ၀င်ငွေကတသမတ်တည်းဖြစ်နေမှုတွေ ဖြစ်လာတာနဲ့ foreclosures ဆိုတဲ့ ပြဿနာတွေ ဖြစ်လာနိုင်တယ်။ Foreclosure ဆိုတာက အကြွေးနဲ့ ၀ယ်ထားသူက လစဉ်ပေးဆောင်ရမယ့် ငွေကို မပေးတော့တဲ့အခါ ချေးငွေထုတ်ထားပေးတဲ့ ဘဏ် (သို့) အခြားသော lenders များက property ownership ကို လွှဲပြောင်းယူရတာဖြစ်တယ်။ ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာ ဘောဂဗေဒ ပညာရှင်တွေက ဒီပြဿနာကို သတိပေးလာကြရတယ်။ ဒါပေမယ့် lenders တွေက ဆက်ချေးနေဆဲပဲ။ foreclosures တွေက ပိုများလာတယ်။ lenders တွေက loans တွေကို mortgage-backed securities တွေအနေနဲ့ အသွင်ပြောင်းလိုက်ကြတယ်။ ဒီနည်းနဲ့ financial risks တွေကို investors တွေရဲ့ ပခုံးပေါ်လွှဲလိုက်ကြတယ်။ ဘဏ္ဍာရေးအင်ဂျင်နီယာတွေက mortgage pools တွေနဲ့ တခြား securities အမျိုးအစားတွေကို စုပေါင်းလိုက်ပြီး investment-grade securities ကို synthesize လုပ်နိုင်မယ့် နည်းလမ်းတွေ ရှာဖွေလာကြတယ်။
၂၀၀၇ ခုနှစ်အစပိုင်းလဲရောက်ရော အမေရိကန်ဈေးကွက်မှာ အိမ်ဈေးတွေထိုးကျလာတော့တယ်။ ဧပြီလမှာ နိုင်ငံရဲ့ အကြီးဆုံး subprime lender ဖြစ်တဲ့ New Century Financial က Chapter 11 bankruptcies ခံသွားတယ်။ သြဂုတ်လလဲရောက်ရော credit crunch ပြဿနာက financial institutions တွေဆီ ပျံ့ကုန်ပါလေရော။ Mortgage-backed securities တွေမှာ အရှုံးပြလာတယ်။ American Home Mortgage လဲ Chapter 11 bankruptcy ခံလိုက်တယ်။ နှစ်ကုန်ပိုင်းရောက်တော့ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဘဏ်ကြီးတွေဖြစ်တဲ့ UBS, Citigroup, Merrill Lynch, HSBC တို့တွေမှာ ဘီလီယံနဲ့ချီပြီး အရှုံးပြလာတယ်။ ၂၀၀၈ခုနှစ်ထဲရောက်တော့ တစတစပိုဆိုးလာတယ်။ ဇန်န၀ါရီလ (၁၅)ရက်နေ့ထုတ် citigroup ရဲ့ report မှာပါခဲ့တဲ့ စတုတ္ထသုံးလပတ်အရှုံးဟာ ဒေါ်လာ ၁၈.၁ ဘီလီယံအထိ ဖြစ်လာတယ်။
ဒီလိုနဲ့ အတိုးနှုန်းမြင့်တက်လာမှု၊ အိမ်ဈေးထိုးကျမှုနဲ့ အမေရိကန်ပြည်သားများရဲ့ ၀င်ငွေတွေ flat ဖြစ်နေမှု အခြေအနေသုံးရပ်ဟာ Global Financial Crisis ကို trigger လုပ်ပစ်လိုက်ပါတော့တယ်။
၂၀၀၈ခုနှစ် နှစ်လည်ပိုင်းရောက်တော့ financial crisis ရဲ့ သက်ရောက်မှုတွေကို ထင်ရှားစွာ မြင်နေကြရပြီ။ စတော့ဈေးကွက်ကျဆင်းလာတယ်။ financial institutions ကြီးတွေ collapse ဖြစ်ကုန်တယ်။ တချို့ကျတော့ competitors တွေက ၀ယ်လိုက်ကြတယ်။ ချမ်းသာတဲ့နိုင်ငံကြီးတွေမှာ သက်ဆိုင်ရာအစိုးရတွေက bail out packages တွေ လုပ်လာကြရတဲ့။ Free Market သဘောတရားကို ဆန့်ကျင်ပြီးGovernment Intervention လုပ်လာကြရတယ်။
ပြဿနာနဲ့ပတ်သက်ပြီး စတင်ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ Wall Street ကို လူတွေက အပြစ်ဆိုလာကြတယ်။ ဘွတ်ခ်ျအစိုးရရဲ့ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု ဘဏ္ဍာရေးစနစ်အတွက် $700 billion bailout package နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဝေဖန်မှုတွေ အများအပြား ပေါ်ထွက်လာတယ်။ နိုဘယ်ဆုရ ဘောဂဗေဒပညာရှင် Joseph Stiglitz ကဆိုရင်
“The administration come up withabill that is based on trickle-down economics. You throw enough money at Wall Street, and some of it will trickle down to the rest of the economy. It's likeapatient suffering from givingamassive blood transfusion while there is internal bleeding; it doesn't do anything about the basic source of hemorrhaging, the foreclosure problem. But it is better than doing nothing and hopefully after the election, we can repair the very many mistakes in it” လို့ ရေးသားခဲ့ပါတယ်။ (Stiglitz, Bail out Wall Street Now, Change them later, Democracy Now!, October 2, 2008)
ဒီလို အမေရိကန်မှာ ရိုက်ခတ်နေတဲ့ ဘဏ္ဍာရေးပြဿနာဟာ ကမ္ဘာ့ကုန်သွယ်ရေးနဲ့ ဘဏ္ဍာရေးရဲ့ Transworld character ကြောင့် ဥရောပတိုက်နဲ့ တခြားဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံတွေကို ဆက်လက်ပျံ့နှံ့သွားတယ်။ ဥရောပတ၀ှမ်းမှာ Financial institutions တော်တော်များများ fail ဖြစ်ပြီး၊ တချို့ဟာဆိုရင် အလျင်အမြန်ကယ်ဆယ်ရမယ့် အခြေအနေတွေ ဖြစ်ကုန်တယ်။ crisis ပျံ့နှံ့မှုက အသွင်သဏ္ဍာန်နှစ်မျိုးနဲ့ဖြစ်လာတယ်။ ပထမတခုက အန္တလန်တိတ်ကနေ ဥရောပဖြစ်ပြီး နောက်ပုံစံတမျိုးကတော့ ဘဏ္ဍာရေးဈေးကွက်ကနေ စီးပွားရေးအဆောက်အအုံတခုလုံးဆီ ပျံ့နှံ့လာတာဖြစ်တယ်။
ဥရောပမှာဆိုရင် သုံးရက်အတွင်းမှာကို နိုင်ငံခုနစ်ခုက ဘဏ်ငါးခုကို bail out လုပ်လိုက်ရတယ်။ ဂျာမဏီမှာ Hypo Real Estate, ဘယ်လ်ဂျီယံ၊ လူဇင်ဘတ်ခ်နဲ့ နယ်သာလန်မှာ Fortis, ဗြိတိန်မှာ Bradford & Bingley, ဘယ်လ်ဂျီယံ၊ ပြင်သစ်နဲ့ လူဇင်ဘတ်ခ်မှာ Dexia, အိုက်စလန်မှာ Glitnir တို့ဖြစ်ကြပါတယ်။
The Economist Magazine က ဥရောပဘဏ်များဟာ အမေရိကန်ထက်ပိုပြီး vulnerable ဖြစ်ကြောင်း သုံးသပ်ရေးသားပါတယ်။ ဒါကလဲ ပြီးခဲ့တဲ့ အပတ်များတုန်းက အမေရိကန်ရဲ့ အကြီးဆုံး thrift တခုဖြစ်တဲ့ Washington Mutual နဲ့ စတုတ္ထမြောက်အကြီးဆုံး ကော်မာရှယ်ဘဏ်ဖြစ်တဲ့ Wochovia တို့ကို forced sale လုပ်ခဲ့တာကြောင့်ပါပဲ။
ဒီပြဿနာဟာ ဥရောပမှာတင် ရပ်နေတာတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ ဟောင်ကောင်၊ အိန္ဒိယနဲ့ ရုရှားက ဘဏ်များကိုပါ ရိုက်ခတ်လာပါတယ်။ ပြဿနာအရပ်ရပ်ဟာ money market မှာ အမြစ်တွယ်နေတာကြောင့် ကမ္ဘာ့စီးပွားရေးအဆောက်အအုံကြီး တခုလုံးကို ကူးစက်နေပါပြီ။ စတော့ဈေးကွက်များ funck ဖြစ်နေပါတယ်။ Interbank market မှာ ဘဏ်အချင်းချင်း ချေးငွေအတွက်ပေးရတဲ့ ဈေးနှုန်းက အရမ်းမြင့်မားလာပါတယ်။ Emerging market တွေမှာ local currencies တွေ plunge ဖြစ်နေပါပြီ။ ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံသုံးဆယ်အထိ Balance of Payment ပြဿနာတွေ ပေါ်လာနိုင်ကြောင်း ကမ္ဘာ့ဘဏ်ဥက္ကဌက ခန့်မှန်းပြောဆိုထားပါတယ်။
စားသောက်ကုန်ပစ္စည်းဈေးတက်မှုတွေ၊ ဖွံ့ဖြိုးပြီးနိုင်ငံများရဲ့ ဘဏ္ဍာရေးမတည်ငြိမ်မှု၊ မရေရာမှုကနေ ပေါ်ထွက်လာမယ့် Knock-on effects တွေ၊ ကမ္ဘာ့စီးပွားပျက်ကပ်ကြီးအတွက် ပူပန်စိုးရိမ်မှုတွေဟာ ဖွံ့ဖြိုးဆဲတိုင်းပြည်များဆိုင်ရာ ဆန်းစစ်သူပညာရှင်တွေအတွက် စိုးရိမ်ဖွယ်ရာ လက္ခဏာရပ်တွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဘောဂဗေဒပညာရှင် Kanaga Raja က နိုင်ငံတကာ commodity ဈေးကွက်မှာ ဖြစ်ပွားနေတဲ့ price booms တွေကြောင့် commodities-dependent economies တွေဟာ external shocks များကို ခံစားလာရဖွယ်ရှိကြောင်း ဆိုထားခဲ့ပါတယ်။ မက်စ်ဝါဒီများကတော့ စီးပွားရေး ကပ်ဆိုက်မှုများဟာ အရင်းရှင်စနစ်ရဲ့ သွင်ပြင်လက္ခဏာရပ်ဖြစ်ပြီး imperialism နဲ့ underdevelopment အကြား၊ capital နဲ့ labor ကြားက contradictions များအပေါ် အမြစ်တွယ်နေကြောင်း ရှင်းလင်းပြောဆိုကြပါတယ်။ အရင်းရှင်ဝါဒဟာ ဒီလို contradictions များကို အမြင့်ဆုံးအဆင့်ရောက်အောင် တွန်းပို့တာကြောင့် တခြားသော ကပ်ဆိုက်မှုများလဲ ထပ်မံဖြစ်ပွားလာရတယ်လို့ ဆိုကြတယ်။ ဥပမာ- စက်မှု နိုင်ငံကြီးများဟာ oil resources ရှားပါးမှုကို ကိုင်တွယ်နိုင်ဖို့ agricultural food ထုတ်လုပ်မှုကို ဇီဝလောင်စာထုတ်လုပ်နိုင်အောင် ပြောင်းလဲပစ်တာကြောင့် အစားအစာ ထုတ်လုပ်မှုမှာ shortage ဖြစ်ပြီး ဈေးနှုန်းတွေလဲ မြင့်တက်လာတယ်လို့ ထောက်ပြကြပါတယ်။ ဆက်လက်ပြီး အာရှဈေးကွက်ဂယက် ရိုက်ခတ်နိုင်မှုများ အကြောင်းကို ရေးသားဖော်ပြပါမယ်။
ခင်မမမျိုး (၁၉၊ ၁၀၊ ၂၀၀၈)